”Ma dal ku ilaaliya ayaad isku taagaysaa?!” – Hay’ad Maraykan ah oo Kenya uga hiillisay Somalia balse hal arrin oo muhim xusuusisay! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Ma dal ku ilaaliya ayaad isku taagaysaa?!” – Hay’ad Maraykan ah oo...
”Ma dal ku ilaaliya ayaad isku taagaysaa?!” – Hay’ad Maraykan ah oo Kenya uga hiillisay Somalia balse hal arrin oo muhim xusuusisay!
(Washington, DC) 09 Maarso 2019 – Hay’ad geed fadhi ah oo Washington saldhigata isla markaana xiriir dhow la leh maamulka Trump administration ayaa hiillo u muujisay Kenya oo abuurtay dood ah inay ”bad isku haystaa” Somalia.
War kasoo fuley, hay’adda American Enterprise Institute (AEI) ayaa lagu sheegay in dowladda Somalia “ay si khaldan turubka u tuuratay” kaddib markii ay xaraashtay baloogyo saliideed oo ku yaalla Badwaynta Hindiya, oo ay sidoo kale sheeganayso Kenya.
AEI ayaa sheegtay in tillaabada Madaxwayne Mohamed Abdullahi Farmajo ay dhaawacayso sumcadda Somalia oo doonaysa inay noqoto dal la maalgashan karo.
“Iibkan xilli aanay jirin wax sharci ahaan kala cadaynaya cidda iska leh ”qalfoofta badeed ee lagu muransan yahay” waxay dhaawacaysaa muuqaalka Muqdisho oo awalba ahayn meel aan ganacsi lala majiirsan.” ayuu yiri guddoonka AEI, Michael Rubin oo intaa raaciyay in tillaabooyinka Somalia aanay micne samaynayn jeer ay ku tiirsan tahay AMISOM oo ay Kenya ka mid tahay.
“Dowladda Somalia ha ogaato in kaddib sanado badan oo musiibo ah, in helista kaash deg deg ay daba socoto dhibaato ay adag tahay in loo dulqaato.” ayuu raaciyay.
Marka laga soo tago inuusan culays sidaa u badan lahayn warka ninkan, misna wuxuu iftiimiyay hal arrin oo muhim ah, isla markaana ay wax ka qaban la’yihiin dowladihii dalka soo maray tan iyo 2004, taasoo ah dhismaha Ciidamada Somalia si ay AMISOM, oo tuhun badani ku hareereeysan yahay, ugala wareegaan amaanka dalka.
Dowladda haatan 2 jirsatey ayaa waloow ay bilowgii muujinaysay astaamo badan oo loo qaatay inay tahay middii dhisi lahayd ciidamada Somalia, ay markii dambe howlahaasi iskood iskaga uumi bexeen.
Previous articleIS EED EED: Inter oo ay arrintu ku adkaatay & Icardi oo keenay shuruudo cusub oo uga daraya! (Arag shuruudihiisa)
Next articleOcasio-Cortez fundraises off claim that AIPAC is ‘coming after’ her, Omar, Tlaib